Wararka - Sannadkii hore, 11.0 GWH oo ah baytariyada caalamiga ah ee lithium ee qalabka korontada ayaa la geeyay, 80% ka mid ah waxaa lagu cunay warshadaha Shiinaha.
Sanadkii la soo dhaafay, 11.0 GWH ee baytariyada caalamiga ah ee lithium ee qalabka korontada ayaa la geeyay, 80% ka mid ah ayaa lagu cunay warshadaha Shiinaha.
Batariyada Lithium waxay la kulantay bedelida baytarika nikkel cadmium ka dibna baytari hydrogen nikkel. Marka laga fiiriyo cabirka suuqa, miisaanka suuqa adduunka ee batari lithium ee qalabka korontada wuxuu gaari doonaa 9.310 bilyan yuan sanadka 2019, iyo cabirka suuqa batari lithium ee qalabka korontada ee Shiinaha wuxuu gaari doonaa 7.488 bilyan yuan.
Dhawaan, evtank, oo ah hay'ad cilmi baaris ah, ayaa si wada jir ah u sii daayay warqadda cad ee ku saabsan horumarinta warshadaha qalabka tamarta Shiinaha (2020) iyadoo lala kaashanayo Machadka Cilmi-baarista Dhaqaalaha ee Ivey. Warqadda cad, evtank waxay ku sameysay cilmi baaris iyo falanqeyn faahfaahsan xaddiga shixnadda, miisaanka suuqa, qaabka tartan ee shirkadaha qalabka korontada, xaaladda dhoofinta ee shirkadaha qalabka korontada, iyo xaaladaha batteriga ee qalabka korontada, waxayna sameeyeen daraasad iyo falanqeyn faahfaahsan. waxyaabaha waaweyn ee waddanka ka jira Falanqaynta jaangooynta ee qalabka korantada ayaa la sameeyaa.
Sida laga soo xigtay warqadda cad ee uu sii daayay Machadka Cilmi-baarista Dhaqaalaha ee Ivey, iyada oo la horumarinayo aaladaha korantada ee aan xadhkaha lahayn, tirada unugyada looga baahan yahay hal aalad koronto ayaa sidoo kale sii kordheysa, iyo rarka baytariyada lithium ee qalabka korontada ayaa si xawli ah u korayay. Sannadka 2019, shixnadda batroolka caalamiga ee lithium ee qalabka korontada waxay gaari doontaa 11.0gwh, iyadoo kororka sanad-sannadeedka ay tahay 25.0%, iyo baahida loo qabo baytariyada lithium ee suuqa aaladda korantada ee Shiinaha waa 8.8gwh, oo sannad-sanad ah kororka 25.7%.
Sida ku cad warqada cad, baytariyada lithium waxay la kulmeen bedelida baytariyada nikkel cadmium kadibna baytariyada hydrogen nikkel. Marka laga hadlayo miisaanka suuqa, miisaanka suuqa adduunka ee baytariyada lithium ee qalabka korontada wuxuu gaari doonaa 9.310 bilyan yuan sanadka 2019, iyo qiyaasta suuqa baytariyada lithium ee qalabka korontada ee Shiinaha waxay gaari doontaa 7.488 bilyan yuan.
Wu Hui, oo ah maamulaha guud ee waaxda cilmi baadhista ee machadka cilmi baadhista dhaqaalaha ee Ivey, ayaa sheegay in baytariyada lithium ee qalabka korontada ubaahan yihiin wax qabad sicir ah, sidaa awgeed xadka ay kujiraan uu ka sareeyo baytariyada nooca tamarta caadiga ah. Muddo dheer, baytariyada qalabka korontada ku shaqeeya ee adduunka waxaa fadhiyay Samsung SDI, Panasonic, Murata, LG iyo shirkado kale oo batari ah oo Japan iyo South Korea ah. Si kastaba ha noqotee, sanadihii la soo dhaafay, shirkadaha Shiinaha sida tamarta Yiwei lithium, Tianpeng, haisida iyo shirkadaha kale waxay bilaabeen inay ahaadaan tiro aad u badan Qaybta suuqa ee shirkadaha batroolka gudaha ee batteriga lithium ee heerka sare ee aaladaha awooda adduunka ayaa si tartiib tartiib ah u kordhaya.
Wu Hui wuxuu sheegay in waqtigan xaadirka ah, baytariyada ugu waaweyn ee qalabka korontada ku shaqeeya ay yihiin 1.5Ah iyo 2.0ah dhululubada ah. Shirkadaha bateriga ee dibada ka jira waxay horey u siiyeen baytariyada qalabka 2.5ah tiro aad u badan. Shirkadaha batari-shiinaha sida tamarta Yiwei lithium waxay sidoo kale siin doonaan batariyada 2.5ah sanadka 2020. Waxaa xusid mudan in ATL iyo shirkadaha batroolka xirmooyinka kale ee jilicsan ay sidoo kale isku dayayaan inay u isticmaalaan unugyadooda xirmooyinka jilicsan qeybta aaladaha korontada.
Warqadda cad ee ku saabsan horumarinta warshadaha qalabka korontada ee Shiinaha (2020), Machadka Cilmi-baarista Dhaqaalaha ee Ivey wuxuu sameeyay falanqeyn faahfaahsan oo ku saabsan astaamaha aasaasiga ah iyo silsiladda warshadaha ee qalabka korantada, xaddiga shixnadaha adduunka iyo miisaanka suuqa ee noocyada kala duwan ee qalabka korontada, Noocyada kaladuwan ee shixnadaha qalabka korontada shixnadaha iyo cabirka suuqa, qaababka tartanka gobolka iyo ganacsiga ee warshadaha qalabka korontada, iyo xaalada dhoofinta iyo xaalada dhoofinta ee warshadaha qalabka korontada Tirada dhoofinta iyo gobolada, wax soo saarka iyo xaalada ganacsi ee qalabka korontada muhiimka ah. shirkadaha, iyo xaaladda ganacsi ee alaab-qeybiyeyaasha bateriga ugu muhiimsan si faahfaahsan ayaa loo falanqeeyay, iyo warshadaha qalabka korontada ee shanta sano ee soo socota si rajo leh ayaa loo falanqeeyay loona saadaaliyay.
12v Lithium Ion Batariga dib loo soo celin karo, 18650 Nimh, Li Battery, 12 Volt Xidhmada Laydhka Lithium Dib u Soo Celin Kara, Batariga Lithium Ion Polymer, 3.7 Batariga dib loo buuxin karo, Dhammaan Alaabooyinka